आमाको ट्रेलर रिलिजमै रोईन् सुरक्षा, हलमा दर्शक के होलान् ? - Filmyfanda : Always Exclusive Entertainment News Portal SiteFilmyFanda
आमाको ट्रेलर रिलिजमै रोईन् सुरक्षा, हलमा दर्शक के होलान् ?
फिल्मी फण्डा । दिपेन्द्र के खनाल निर्देशित फिल्म आमाको ट्रेलर सार्वजनिक गरिएको छ । राजधानीमा एक कार्यक्रमको आयोजना गर्दै फिल्मको ट्रेलर सार्वजनिक गरिएको हो । सार्वजनिक ट्रेलरमा आमालाई केन्द्र भागमा राखेर प्रस्तुत गरिएको छ । पारिवारीक कथालाई आमाको दृष्टिकोणबाट नेपाली समाजको चित्रण फिल्ममा गरिएको छ । विशेषत छोरा छोरीको विभेदलाई फिल्म आमाले चित्रण गरिएको हो । फिल्ममा आमाको भुमिकामा बरिष्ठ कलाकार मिथिला शर्मा देखिएकी छिन् । यस्तै छोरीको भुमिकामा नायिका सुरक्षा पन्त देखिएकी छिन् ।
पशुपति प्रसाद नहेरेका दर्शक सायदै होलान् । र पशुपति प्रसाद हेरेर भावुक नहुने अझ भनौं मन नछोएका कमै होलान् । त्यहि सुपरहिट फिल्म पशुपति प्रसाद निर्देशन गरेका निर्देशक दिपेन्द्र के खनालले पशुपति प्रसाद पछि उस्तै निरन्तरतामा आमा निर्देशन गरेको बताए । यसले फिल्ममा मात्र सिमित नभई सबै आमाहरुको प्रतिनीधित्व गर्ने पनि निर्देशक खनाले बताए ।
यस्तै फिल्मको ट्रेलर सार्वजनिक कार्यक्रममा बरिष्ठ कलाकार मिथिला शर्माले आफ्नो अभिनय करिअरमै आमा एक घुम्ती भएको बताईन् । आफुले हालसम्म सबै खालको भुमिका विभिन्न फिल्महरुमा निर्वाह गरेको सम्झदै फिल्म दिदी बाट आफुलाई दिदीको नाम दिईएको समेत उनले बताईन् । यस्तै अब उपरान्त फिल्म आमा पछि सबैले आफुलाई आमाको रुपमा परिचित गराउने विश्वास व्यक्त गरिन् । यता नायिका सुरक्षा पन्तले एकदमै कम मान्छेले मात्र मनछुने पात्रको रुपमा काम गर्न पाउने बताईन् ।
त्यसमा आफु परेको भन्दै उनले छायाँकनमा भोगेका कुराहरु गर्दा भावुक भएको बताईन् । फिल्मले सबै दर्शकहरुको मन छुने पनि उनले विश्वास व्यक्त गरिन् । फिल्म पशुपति प्रसाद पछि दिपेन्द्र के खनालको प्रतिक्षित फिल्म बनेको छ आमा । छायाँकन देखिनै मिडियामा हाईप बनाईरहेको फिल्मप्रति दर्शकहरुको प्रतिक्षा पनि तिब्र रहेको छ । फिल्ममा निर्देशक खनालकै कथा रहेको छ भने उनी आफैले फिल्म खिचेका हुन् । उनले आफ्नो फिल्ममा पात्र विशेष रहने कारण चार तीनको अनुपात फ्रेमिङमा फिल्म खिचेको बताएका छन् ।
फिल्ममा मिथिला शर्मा र सुरक्षा पन्तको अलवा सरिता गिरी, देशभक्त खनाल, मनिष निरौला, लक्ष्मी भुषाल, टिका पहारी, पदम प्रसाद पौडेललगायतको अभिनय रहेको छ । शिवरात्रिको अवसर पारेर फाल्गुन ९ गते बाट रिलिज हुन लागेको फिल्म आमालाई डिएस डिजिटलको ब्यानरमा शर्मिला पाण्डेले निर्माण गरेका हुन् । फिल्ममा सुवास भुषालको संगीत र दिर्घ खड्काको सम्पादन रहेको छ ।
आमा फिल्मको ट्रेलर यस्तो छ:
क्लिक गरि यो पनि पढ्नुहोस् ।
‘चालबाज’मा पुष्पपछि अर्को चाल, केकी आउट बर्षाले मारिन् बाजी
फिल्मी फण्डा । फिल्म चालबाजको छायाँकन थालिएको छ । पूर्वको दार्जिलिङ्गबाट शुरु गरिएको फिल्ममा कलाकारहरु परिवर्तन हुने क्रम जारी छ । केही समय अघि अविनाब प्रधान मूख्य भुमिकामा देखिने समाचार बाहिरिएको थियो । उक्त फिल्ममा केकी अधिकारी रहने पनि निश्चित गरिएको थियो ।
फिल्ममा नयाँ चाल चाल्दै निर्माण टिमले पुष्प खड्कालाई प्रवेश गरायो । पुष्प खड्कालाई मूख्य भुमिकाको जिम्मेवारी दिने र सहायकमा अविनाशलाई राखिने भएको छ । यतिमै मात्र फिल्मको कास्ट सकिएको छैन । नायिका केकी अधिकारी अर्को फिल्म झिगो दाउ मा व्यस्त भएपछि फिल्मका निर्माण टिमले नायिका नै परिवर्तन गरेका छन् । अब भने फिल्ममा केकी अधिकारीको ठाउँमा बर्षा शिवाकोटी रहने पक्का भएको छ ।
सुरुवातमा चलचित्रमा नायिका केकी अधिकारीले काम गर्ने पक्का भएको थियो । तर, केकीको हाल चलचित्र ‘झिंगे दाउ’को छायांकन चलिरहेको छ । केकीले समय दिन नसकेपछि उनको ठाउँमा नायिका वर्षा सिवाकोटीलाई प्रवेश गराईएको हो । नायिका सिवाकोटी यहि शुक्रवारबाट छायाँकनमा व्यस्त हुनेछिन् । अरुण तामाङको लगानीमा बनिरहेको यो फिल्मलाई कैलाश गुरुङले निर्देशन गरिरहेका छन् । सौरभ लामाले फिल्म खिचिरहेका छन् ।
यो पनि क्लिक गरिपढ्नुहोस् : सेक्सी सुरवीनाको अवतार ‘शुभ मंगल’ मा
फिल्मी फण्डा । हट तथा बोल्ड नायिका सुरवीना कार्की फिल्म ‘शुभ मंगल’ मा देखिने भएका छन् । प्रेमकथामा ‘शुभ मंगल’ नामक फिल्म निर्माण हुने भएको छ । उक्त फिल्ममा नायिका सुरवीना कार्की अनुबन्ध भएकी हुन् । अष्ट्रेलिया निवासी निर्देशक मनोज अधिकारीले निर्देशन गर्ने फिल्ममा कुशल थापा, बिकास चापागाईं, केपी शर्मा, आर्यन शर्मा, सदिक्षा पाण्डेलगायतका कलाकारले पनि अभिनय गर्नेछन् ।
देउराली फिल्मस्को ब्यानरमा संगम क्षेत्री र नारायण दत्त अधिकारी निर्माता रहेको फिल्मको सुटिङ नेपाल र अष्ट्रेलियामा गरिने जानकारी निर्देशक अधिकारीले दिएका छन् । अष्ट्रेलियामा बस्ने नेपालीको जीवनशैली, प्रेम, सम्बन्धलगायतका बिबिध बिषयमा निर्माण हुने फिल्मको केही समयपछि औपचारिक रुपमा घोषणा गरिने बताइएको छ । निर्देशक अधिकारीकै लेखन रहेको फिल्मको सुटिङ केही समयपछि थालिने छ । फिल्मका अन्य कलाकार तथा प्राबिधिक चयन कार्य जारी रहेको निर्देशक अधिकारीले बताएका छन् ।
यो पनि क्लिक गरिपढ्नुहोस् : फागुन ३० मा ‘नीरफूल’
फिल्मी फण्डा । फिल्म ‘नीरफूल’ फागुन ३० गतेदेखि प्रदर्शनमा आउने भएको छ । गत भदौ २७ मै रिलिज हुने भनिएको फिल्म पोस्ट प्रोडक्सनको ढिलाइको कारण फागुनमा सरेको निर्माण टिमले जनाएको छ । फूलमान वलको निर्देशन रहेका फिल्म भूकम्पका कारण विछोडिएका एक परिवारको प्रेमकथामा आधारित छ ।
फिल्ममा दयाहाङ राई, रेखा थापा, शान्ति वाइबा, बुद्धि तामाङ, पुष्कर गुरुङ, जिम्मे छ्योइकी घिसिङ, राजन खतिवडा, सरोज अर्याल, सरिता गिरी लगायतका कलाकारको अभिनय देख्न सकिन्छ । यो फिल्म गणेश हिमाल क्षेत्रमा पर्ने रुबी भ्याली र काठमाडौंमा छायांकन गरिएको छ । फिल्ममा रुबी भ्याली क्षेत्रको भूगोल र संस्कृति देख्न सकिनेछ । फिल्मको पटकथा निर्देशक वल र सचिन घिमिरेले लेखेका हुन् ।
फिल्मको निर्माणमा ‘सहकार्यको मोडल’ अपनाइएको छ । फ्रेण्ड्स अफ नेपाल–म्यान्मार फ्रेन्डसिप काउन्सिलसितको सहकार्यमा सेलो प्रोडक्शनले निर्माण गरिरहेको फिल्मको कार्यकारी निर्माता दुबईकी डोमा सोनाम छिन् । यस्तै, फिल्ममा माया केसी, दिपक श्रेष्ठ, चन्द्रमाया तामाङ, उदय लामा, रोज लामा, दिनेश लम्तरी मगर, दिजेश श्रेष्ठ, तेन्जिन सोनाम लामा, गणेश थापा, अशोक थापा र विके श्रेष्ठको संयुक्त लगानी छ । फिल्ममा अर्जुन पोखरेलको संगीत, प्रमोद कार्कीको छायांकन र निमेष श्रेष्ठको सम्पादन रहेको छ ।